UEFA oo ku dhawaaqday Garsooraha dhex dhexaadin doona Finalka Champions League Waase Nin Caynkee ah? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
UEFA oo ku dhawaaqday Garsooraha dhex dhexaadin doona Finalka Champions League Waase Nin Caynkee ah?
(08-05-2018) Xiriirka kubada Cagta qaarada yurub ee Magaciisa loosoo Gaabiyo UEFA ayaa sirasmi ah ugu dhawaaqay Magaca Garsooraha qaban doona Cayaarta kama dambaysta ah ee koobka Champions League Cayaartaas oo dhex mari doonta kooxaha Liverpool iyo Real Madrid.
Garsooraha loo doortay in uu qabto Cayaarta kama dambaysta Champions League waxaa lagu Magacaabaa Milorad Mazic Waa Nin u dhashay dalka Serbia kana mid ah Raga ugu Sareeya ee kujira Xiriirka FIFA gaar ahaan dhanka Garsoorka waxaana loo doortay koobka aduunka 2018 in uu ka mid Noqdo Garsoorayaasha dhex dhexaadin doona.
Milorad Mazic ayaa kulankii ugu danbeeyey ee uu qabto Liverpool oo dheeleysa waxa uu ahaa mid ay ladheeleen Manchester United bishii Maarso 2016 halka Real Madrid Cayaar ay dheeleyso uu qabtay kulankii Super Cupka yurub ee ay Sevilla kaga badiyeen 3-2 kulankaas oo dhacay Xiligii lasoo dhaafay.
Ninkaan ayaa waxaa lagu Xasuustaa dagaal dhex maray isaga iyo Cristiano Ronaldo kadib markii dhe dhexaadiyey Cayaartii koobka aduunka 2014 ee dhex martay dalalka Jarmalka iyo Portugal waxaana uu calaamada Casaanka ah siiyey daaficii dalka Portugal ee Pepe kadibna Jarmalka ayaa ku badiyey 4-0 markaa kadib Ronaldo ayaa siweyn u canbaareeyey Milorad Mazic.
Cristiano Ronaldo ayaa ku canbaareeyey Garsoorahaan Rigoore been ahayd oo uu u dhigay Mario Gotze kaas oo isku dhex tuuray Xerada Ganaaxa markii uu u qaatay in uu Taabtay Joao Pereira.
Kulankii Wareega 16 ka ee koobka UEFA Europa League. ee dhex maray kooxaha Manchester United iyo Liverpool ee uu dhex dhexaadiyey Garsoorahaan ayaa ku dhamaaday bareejo 1-1 bareejadaas oo uusan ku qanacsanayn macalin Jurgen Klopp.
Sidoo kale Xiriirka UEFA ayaa Garsoore Bjorn Kuipers u Magacaawday in dhex dheaadiyo Cayaarta Finalka koobka Europa League ee dhex mari doonta kooxaha Atletico Madrid iyo Marseille waana Nin u dhashay dalka Holland.